Period A cusub Of jeebkayga-Electric Iskeetboodhyada - Jomo Technology Co., Ltd
Sida caadiga ah, ay sabab u tahay xajmiga iyo miisaanka ah rullebrett iyaga siday tahay arrin. Our inta badan shaqaalaha ku salaysan Germany ayaa muddo dheer lala yaabo ku saabsan "electro-socodka", taas oo walaac weyn siyaasadeed ee Germany oo daacad ah dalalka oo dhan oo dhan iyada oo Europe. Waxaan bixinaa Ra'iisul-uruursanayey caawimaad iibsadaa sida wax ku ool ah in aad kor iyo shaqeeyaan haddii aad tahay model ah iibsadaha cusub ama mid orod dheer sii! Waqtiga oo dhan xidho koofiyad, iyo sidoo kale waxyaabo kale oo amniga la aqbali karo (tusaale ahaan isku hallayso aad qaanuunka maxaliga ah, laga yaabaa in aad waa inuu gashado koofiyad marka fuushan. Baahan gargaar si ay u dhisaan ah skeidgareeyo korontada? KOOWHEEL Drive waa drive a mountable korontada jeesta kasta skeidgareeyo joogto ah gelin ah skeidgareeyo korontada - daqiiqo gudaha. In la eego kala duwan, ay u socoto la soo baxay isaga oo sheegay in ay ka weyn kala duwan, ka sareeya, sababtoo ah waxaa laguu oggolaan karaa in cowl masaafo cajiib ah oo aan u baahan in ay ku nasto islamarkaana 10 daqiiqo kasta. Ma ahan in kiiska aad raadinayso brand cusub hab dhaqaale ee gaadiidka ama kaliya u baahan tahay farxad leh, ee Koowheel markab ku siin doonaa ugu tayada sareeya ee kobaha.
Koowheel natiijooyin fiican Cruiser ee halkan ka helay sida la yaab leh, ka fekereyso qiimihii, taas oo hoos u dhac badan rullebrett kale oo badan korontada. The Koowheel waxaa ka shaqeeya isticmaalka xakamaysada ah Xararad fog kaas oo intaasi dheer oo ku faantaa of motor cilmi in brushless. Sida bedel, waxa uu siiyaa dawladaha hooyo maamulka si loo ogaado in aysan ogolaan in khibradda gaar ahaan magaalooyinka qofka ay. Koowheel loogu tayada Ra'iisul iyo waxqabadka rullebrett korontada xad-dhaaf ah taageerayaasha gaadiidka magaalada iyo hawlaha isboortiga. Koowheel siineya ah skeidgareeyo korontadala qiimihiisu la qiyaasi karo oo damaanad tartan kharashka la awoodi karo. Waxaan ahay dareen ku saabsan qiimihii qaadashada khatarta - adduun in inta badan jecel yahay ma aan samayn. Tani waxay awood aad si ay ula socdaan degree batteriga, si aadan adigu u hesho la skeidgareeyo ah aan waxtar lahayn karinoo. An qaybaha muhiimka ah ee qalabka lagu skeidgareeyo korontada waa batariga for laadyo skeidgareeyo ku motored, xakamaysada ah ee xawaaraha iyo baasiin, guddiga ugu weyn ee sii kordhaya iyo xeedho for recharging batteriga.
Labada kala duwan oo muhiim ah motor inaan halkaan ka fikirin ayaa laga yaabaa in-wheel matoorrada xarun ama suunka riixay kuwa. Our Electric skeidgareeyo Qalabka caawin doona dhigi habkan fudud. Sida caadiga ah, waxaa jira rullebrett korontada iyo rullebrett korontada on-wadada. Halka waxa ka mid ah aan posts kulul oo inta badan daawaday ku dhex jirtay, dad badan oo ii sheegay in feedback in ay jirto ayaa qaar ka mid ah loox dhab fiican ka dhiman. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii horumarinta rullebrett shidaalka ku shaqeeya ah, waxaa jiray a sababaha dhowr wanaagsan oo ka dhigay, kuwaas oo loox kaxaynta gaadhi in la mamnuucay sida: qaylada soo saaray matoorada iyo matoorada shidaal in la abuuro wasakhaysan.
Baadi-goobka ay ogaadeen aad u skeidgareeyo fiican korontada sii, diyaar u ogaato? Rullebrett KOOWHEEL qas qoto dheer ee hawlaha isboortiga xad-dhaaf ah la thrills classic of skateboard doonnida mid ka mid ah tamarta-aragnimo ugu fiican ee hoyga ah la heli karo! Hadda waxaan qaadaan, in aan view, 10 rullebrett weyn loo isticmaalo maalin kasta. Top-of-the-line dib u eegay saarayaasha 2018 waa Koowheel. Waxay bixisaa xawaaraha 30km / h caadiga ah, top xawaaraha 45km / h, tag si dhakhso ah, oo aad dabooli karaa 20 ilaa 25 km ay la socoto lacag hal batteriga. Batteriga joogo waa 20pcs18650 unugyada lithium heerka sarreeya.
waqti Post: Feb-06-2018
© Copyright - 2015-2021: Dhamaan Reserved Rights. Power by Koowheel.com